सरकारलाई सूचना दिनुहोस्, १० लाखसम्म लिनुहोस, कस्ता सूचना कसरी दिने ? – Jaljala Online
काठमाडौँ । सरकारलाई सूचना (सुराकी) दिए १० लाख सम्म पुरस्कार पाइने कुरा तपाईंलाई थाहा छ ? हो, सरकारलाई सूचना दिएकै भरमा तपाईंले १० लाख रुपैयाँसम्म पाउन सक्नुहुन्छ ।
यो खबर एलिजा उप्रेतीले रातोपाटीमा लेखेकी छन् । कुनैपनि वस्तु चोरी पैठारी भएको छ भने सोको सूचना सरकारलाई दिनुहोस् र १० लाखसम्म पाउनुहोस् । यस्ता खालका सूचनामा सरकारले १० लाखसम्म पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीको नियम ४८ मा सुराकी प्रतिवेदन वा सूचना सम्बन्धी व्यवस्था छ । मालवस्तु पक्राउ गर्नु अगावै सुराकी सम्बन्धी प्रतिवेदन वा सूचना पठाउनु पर्नेछ । पक्राउ परेपछि प्राप्त भएको सूचनालाई मान्यता दिइने छैन । सुराकी सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको प्रमुख वा महानिर्देशकलाई दिनुपर्नेछ ।
यसरी महानिर्देशकलाई प्राप्त भएको सूचना तत्काल महानिर्देशकले सम्बन्धित भनसार कार्यालयको प्रमुखलाई मौखिक वा लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ । दुई वा दुइ भन्दा बढी ठाउँबाट सूचना आएको छ भने पहिलोले मान्यता पाउनेछ ।
Posted on August 5, 2019 Author Jaljala Online
मध्यरातमा आमा र छोरीको हत्या प्रयास भयपछी……….
Posted on May 23, 2019 Author Jaljala Online
जेठ ९, झापा । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१० प्रशंसा टोलमा तीन महिला मात्र बस्दै आएको एक घरमा राति बाहिरबाट प्रवेश गरेको अज्ञात आक्रमणकारीले आमा र नाबालिका छोरीको हत्या प्रयास गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार बुधबार राति भएको उक्त आक्रमणमा ४३ वर्षीया आरती चौहान बुढाथोकी र उनकी आठ […]